Yiqiniso, eyigugu kakhulu ubhekwa ijusi fresh ithanga, okuyinto ingatholakala esebenzisa yasendlini juicer futhi sihlanganise. Kodwa ngenxa ukunambitheka ngokwanele ukuwaphuza, akuzona zonke ezivumayo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi izingane ezincane. Ngaphandle okumnandi ithanga kukusha isandla akufanele ngaso sonke isikhathi. Ukuze sihlakaniphele ezintekenteke kancane, ungawafaka ukuphuza kancane ushukela, uju noma ijusi yezithelo. Njengoba for ukutholakala kwayo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, lokhu ngokuvamile ibangelwa ukuwafaka.
Indlela ukupheka ijusi ithanga nge uginindela
Inketho elula ukwakha lesi siphuzo - sebenzisa juicer. Eziningi zalezi amadivaysi ikuvumela juice like a uginindela, futhi ngaphandle kwalo. It kuphela uhlala ukukhetha uhlelo olufanele (noma sebenzisa okunamathiselwe kunesidingo), ikhasi bese uthathe ithanga futhi balidlulisele ezinganeni ngedivayisi.
Uma juicer ngakwesokunene wayengekho, ungazama ukwenza juice usebenzisa blender. Ngenxa yalesi ithanga bahlanza, uthathe cubes, sigcwale amanzi bese upheka phezu ukushisa low kuze kuze kuba ithambe. blender ke basenza puree, ukulungisa ukujiya esebenzisa amanzi abilayo. Kuzo zombili lezi zimo, kubaluleke ukuthi yemifino wawumnandi. Khona ijusi ingasetshenziswa ngaphandle izithasiselo.
Indlela ukupheka ijusi ngaphandle Indaphundaphu ithanga
Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa uhlelo juicers ezifanele. Nakuba engekho kuzosiza grater emihle. Ngosizo yemifino comminuted, bese elicwengekileyo ngokusebenzisa cheesecloth.
Lo mkhiqizo ubhekwa iyasiza ngenxa yokuqukethwe okusezingeni eliphezulu amavithamini namaminerali, kuyilapho Ukudla. Izimo ukusetshenziswa kwalo ezingajwayelekile kakhulu. Lokhu juice Kunconywa njengoba zokwenezela yokudla izingane ezisukela izinyanga eziyisithupha. Ithanga futhi iwusizo kakhulu kulabo unezinkinga kwesibindi kanye nezinye izitho zokugaya. Ngakho-ke, zisebenzise lokhu isiphuzo can ngokuphelele konke.
Indlela ukupheka ithanga juice kusukela ebusika
Njengoba eqoqwe isivuno esihle ubuhle enkulu elikhanyayo, noma ukuthenga inombolo ezanele emakethe eseduze, ungakwazi uzibeke isitoreji emiphongolweni. Ithanga akuyona okonakalayo kakhulu, ngakho ayo zokupheka usebenzisa isitokwe ekwindla, kungaba kuze entwasahlobo noma ngisho ehlobo. Uma endaweni ayikuvumeli, ungakwazi Thenga lekusasa umkhiqizo osuphelile.
ithuluzi Ideal ukuthola ngayo sokovarka. Kulokhu, ngaphambi ukupheka ijusi kusukela ithanga, usike bayifaka cubes. Khona-ke, yemifino ibekwe endaweni esitsheni akhethekile, unezela amanzi kancane. Okuphuma ilungele juice, ezingasetshenziswa kuphela uthele izimbiza oyinyumba naseduze. Ushukela kungcono hhayi anganezela kanjalo kukho, noma okungenani ke kungenziwa kakade ngaphambi nje kokuba ukusetshenziswa. Uma sokovarki endlini, ungavele ngawakhamela ithanga usebenzisa juicer noma gauze bese inzalo imizuzu 30-40 futhi eduze amabhange.
Indlela ukupheka ithanga juice kusukela ingane
Lokho bajabulela ukuphuza lesi siphuzo enempilo, kubalulekile ukwenza okumnandi, unezela uju noma ushukela. Enye - ukuba ithanga lakhe juice, uthele umthamo ofanayo isanqante, apula noma orange uhlanganise nabo. Njengomthetho, izithelo elimnandi kakhulu futhi amnandi uphazamisa ukunambitheka engathandeki. Izingane baphuze ingxube ubumnandi. Uma wayefisa, kungenzeka ukulungiselela ubusika inzalo.
Umlingisi Stepanchenko: Biography, Filmography, futhi isimo somshado